Imikhiqizo Yezemidlalo Yangaphandle - Abathengisi be-Ningbo Union Imp & Exp Co., Ltd.
Imikhiqizo Yezemidlalo Yangaphandle Isitolo esidayisa yonke impahla
Ngenxa ye-COVID-19, abantu banaka kakhulu ukuzivocavoca umzimba futhi nemfuno yemikhiqizo yezemidlalo nayo iyanda. Ngabe ufuna ukwenza imikhiqizo yezemidlalo enenzuzo enkulu evela eChina? Njengenkampani Enkulu Yokuhlwaya Ye-Yiwu, sinokusebenzisana okuzinzile nezimboni ezingaphezu kuka-10,000 eziqinisekisiwe.
Singakusiza ekutholeni umkhiqizi onokwethenjelwa, uxoxisane ngamanani nomenzi, ulandele umkhiqizo, uqinisekise ikhwalithi nokuthunyelwa, njll. Eminyakeni engama-23 edlule, sisungule ukubambisana okuzinzile nezitolo ezinkulu eziyi-1,500, abathengisi bezitolo, abathengisi, njll. Funa ukubambisana kwesikhathi eside namakhasimende amasha.
Izesekeli zebhayisikili nezithuthuthu
Amagilavu ​​Wokuhamba ngebhayisikili nesigqoko sokuzivikela
Buka i-China Sourcing Company
Ezemidlalo Zamanzi & Amabhodi okushibilika
Thola i-One Stop Export Service
Ibhalansi Isithuthuthu & Snowboard
Umenzeli Wakho Onguchwepheshe
Itende & Isikhwama Sokulala
Vakashela Igumbi Lethu Lokubukisa
Izintaba Ubhaka & Outdoor Flashlight & amalambu
Imikhiqizo Ye-Yiwu Market Online
Uma ufuna ukubuka imikhiqizo eminingi yezemidlalo, sicela uxhumane nathi futhi sizokucaphuna ngokushesha okukhulu.
Ngaphezu kwemikhiqizo yezemidlalo, singakusiza futhi ukuthola ezinye izimpahla zabathengi, ezifana nemikhiqizo yasendlini, amathoyizi, izinto ze-elekthronikhi, imikhiqizo yengadi, izimpahla zesilwane, imikhiqizo yezobuhle, njll.
Sigxila enanini elikhulu lezimpahla zabathengi, ngokuvamile ubuncane Isamba se-oda singama-dollar ayi-10 000 aseMelika futhi sisekela imikhiqizo exubekile. Uzakwethu onokwethenjelwa wokuthola ulwazi eChina.
Thola Isilinganiso Esisheshayo